Xasan Cabdulle Qalaad "Shirka Kenya rajadiisu waa fiican tahay"
Guddoomiyaha gobolka Hiiraan Xasan Cabdulle Qalaad iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maalmahaan ku sugnaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya, isagoo wada hadallo kala lahaa dowladda Kenya gogol xaarka shirka dib u heshiisiinta Soomaaliyeed ee Kenya.
Qalaad oo shalay iigu warramayey magaalada Nayroobi ayaa sheegay in weli uu wada hadal la leeyahay dowladda Kenya, natiijada kulankoodana la filayo in maalinta berri ah uu soo baxo.
Isagoo ka hadlayey shirka dib u heshiisiinta Soomaaliyeed ee la filayo inuu ka dhaco magaalada Eldoret ee dalka Kenya waxa uu sheegay inuu rajeynatyo in shirkaas uu mira dhalo.
"Mira dhalinta waxaa ka horreeya qabsoomiddiisa" ayuu yiri Guddoomiyaha gobolka Hiiraan oo sheegay in isaga iyo wafdigiisa ay ku laaban doonaan Beledweyne, kaddibna ay imaan doonaan marka waqti go'an loo qabto shirka.
Qalaad, waa ka gaabsaday inuu sheego tirada saxda ah ee uu ka helay shirka Kenya, waxaana uu sheegay in weli liiska ergooyinka uusan haynin, "is beddel ayaa mar walba soo baxaya, liisaskuna waa is beddelayaan" ayuu yiri.
Wararka la isla dhex marayo magaalada Nayroobi ayaa sheegaya in Qalaad uu ka helay guddiga qabanqaabada shirka ee qoraya liiska dad ka qayb galaya shirka nabadda tiro gaaraysa 8 illaa 14.